Tranonkala Cloud Elementor: Amboary ny tranokalanao WordPress Elementor amin'ity fampiantranoana voatokana voatokana ity | Martech Zone
Tranonkala Elementor Cloud: Amboary ny tranokalanao WordPress Elementor amin'ity fampiantranoana voatokana tohana tanteraka ity
Alatsinainy Martsa 7, 2022 Alatsinainy Martsa 7, 2022 Douglas Karr
Nandritra ny volana vitsivitsy lasa izay, nanampy mpanjifa iray aho tamin'ny fanatsarana ny tranokalany naorina tamin'ny WordPress ary nampiasa ny Mpamorona Elementor… izay inoako fa ny tsara indrindra ho hitanao. Voatanisa ho iray amin'ny ahy izy io soso-kevitra WordPress plugins.
Tamin'ny fotoana iray, ny Elementor Builder dia fanampiny fanampiny amin'ny lohahevitra rehetra. Ankehitriny, lasa matanjaka ny mpanamboatra ka afaka manangana endrika avy amin'ny lohahevitra ianao satria manana tranomboky be dia be amin'ny takelaka sy lahatsoratra. Miaraka amin'ny widgets tsy mampino +100 mahery sy maodely 300+, azonao atao ny mamorona karazana tranokala azonao eritreretina. Elementor dia mifanaraka tanteraka amin'ny WooCommerce ihany koa.
Ny WordPress dia mety ho sarotra be ny mamaha olana sy manitsy rehefa misy olana. Raha manana olana ny tranokalanao WordPress, matetika ny mpampiantrano anao no hanome tsiny ny loha-hevitrao, ny fanohanan'ny loha-hevitrao dia matetika manome tsiny ny plugins anao, ary ny fanohanan'ny plugin anao dia mety hanome tsiny ny fampiantranoana anao… ary mahazo resolution. Mba hanaovana izany, mila manana traikefa an-taonany ianao amin'ny fampivelarana sy fampiharana WordPress… izay maharesy ny tanjona amin'ny fampiasana ireo vahaolana ivelan'ny boaty ireo.
Ahoana anefa raha afaka manambatra ny fampiantranoana, ny backups, ny lohahevitra ary ny plugin ianao amin'ny vahaolana tokana sy mora? Ianao dia afaka…
Fampahafantarana ny tranokalan'ny Elementor Cloud
Elementor dia nanao dingana lehibe tamin'ny alàlan'ny fandefasana ny sehatra fampiantranoana azy manokana, Elementor Cloud.
Mahazo ny tombontsoa rehetra amin'ny Elementor Pro ianao, miaraka amin'ny fanohanana ny zava-drehetra manomboka amin'ny tonian-dahatsoratra ka hatramin'ny fampiantranoana:
Ny vidiny isan-taona dia $99 tsy misy sara miafina
Fampiantranoana namboarina avy amin'ny Google Cloud Platform
Secure CDN avy amin'ny Cloudflare
Fanamarinana SSL maimaim-poana avy amin'ny Cloudflare
20 GB fitehirizana
Fifandraisana sehatra manokana maimaim-poana
Subdomain maimaim-poana eo ambanin'ny elementor.cloud
Famerenana mandeha ho azy indray mandeha isaky ny 24 ora
Hidin-tranonkala mba hitazonana ny vohikala iray an-dalam-pandrosoana ho manokana
Backups manual avy amin'ny My Elementor kaonty
Ny zavatra rehetra dia azo fehezina avy amin'ny My Elementor dashboard. Any no ahafahanao miditra amin'ny dashboard WordPress anao, mampifandray sehatra mahazatra, mametraka ny sehatra voalohany anao, mamono sy mamono ny Site Lock, mitantana backups, mamerina ny tranokala raha ilaina, ary ireo hetsika mahasoa hafa rehetra.
Tranonkala Elementor Cloud dia safidy tsara ho an'ny mpamorona tranonkala izay te hifantoka amin'ny famoronana vohikala amin'ny fomba mora, satria izy ireo dia mahazo vahaolana faran'izay mandaitra eo ambanin'ny tafo iray. Ary koa, tsara ho an'ny olona rehetra manangana tranokala ho an'ny mpanjifa izany, satria mamela ny fizotran'ny fandefasana mivantana sy manamora ny fikojakojana.
Mahazoa tranokala rahona
Fambara: mpiara-miasa aminay izahay Elementor, My Elementor, ary Tranonkala Elementor Cloud ary mampiasa ireo sy ireo rohy mifandray hafa manerana an'ity lahatsoratra ity.
Tags: tsara indrindra WordPress Pluginselementorrahona elementortranonkala elementor cloudelementor prosehatra cloud cloud googlemy elementormpanamboatra pejySSLwoocommerceWordPressbackup an'ny WordPressWordPress hostingmodely wordpresswordpress widgets
Mba hisarihana ny fisoratana anarana amin'ny mailaka dia tsy maintsy manaporofo ny fahaizan'izy ireo manokana amin'ny fisoratana anarana ny mpamoaka lahatsoratra.